प्रशोधित पानीमा लापरवाही किरा र लेउ भेटिए – Khabar Patrika Np
प्रशोधित पानीमा लापरवाही किरा र लेउ भेटिए
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १९, २०७७ समय: ६:५३:२३
काठमाडौं । प्रशोधित पानीमा किरा र लेउ भेटिएपछि सुर्खेतका दुई वटा पानी उद्योगका सञ्‍चालकलाई कारबाही गरिएको छ । प्रशोधित पानीमा लापरवाही गरी विक्री वितरण गरेको भन्दै सुर्खेत जिल्ला अदालतले ५०/५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
दुषित पानी विक्री गरेपछि अदालतले जनही ५०/५० हजारको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो । मध्यपश्चिम वाटर एण्ड वेभरेज उद्योग प्रा.लि.का सञ्‍चालक कृष्ण आचार्य र देउती दर्शन वाटर एण्ड वेभरेज प्रा.लि. का सञ्‍चालक भीमबहादुर भण्डारीलाई अदालतले जनही ५०/५० हजारको जरिवना गर्ने फैसला गरेको हो ।
आचार्य र भण्डारीविरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले दुषित खाद्य वस्तु (पानी) उत्पादन तथा विक्री वितरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कार्यालयले गत फागुन २८ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको अदालतका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको चैत नौ गतेको इजलासले सञ्चालक आचार्य र भण्डारीलाई ५०/५० हजार जरिवना गर्ने फैसला भएको सूचना अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरितको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम पाँच वर्ष कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाए हुने उल्लेख गरेको छ । सो अनुसारको अधिकतम जरिवानाको सजाए भएको उनको भनाइ छ ।